complete guide to window server 2008 — MYSTERY ZILLION
complete guide to window server 2008
December 2008 edited May 2010 in File Request
complete guide to window server 2008 လေးလိုချင်လို့ပါ...
rapid share link ကို မပေးကြပါနဲ့ဗျိုး
ဒေါင်းဖို့ အရမ်းကို ခက်ခဲလို့ပါနော်
ကူညီပါဦး ကိုကိုတို့ မောင်လေးတို့ ေ၇...:D:D:D
အမရေ.. လိုချင်တာ စာအုပ်လား..ဆော့ဝဲလ်လား မသိလို့ တွေတဲ့ စာအုပ်လေးကို rs ကနေဒေါင်းပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မူရင်းက filesize 70MB ကျော်တောင်ရှိလို့ ပြန်ချုံလိုက်တာ ၃၀ နီးပါရှိတယ်။ fileden မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ winrar နဲ့ ငါးပိုင်းခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ :67:
ပုလုကွေး စိတ်နဲ့ လူနဲ့ မကပ်လို့ လင့်မတင်ပဲ ကျန်ခဲတယ်ဗျ..ဟီးဟီး
ပုလုကွေး MZ တက်ရင်း Chatting ၀င်နေတာဖြစ်ရမယ် .... :39:
ပုလုကွေး စိတ်တွေက ကွေးလုပု ဆီရောက်နေတာဖြစ်မှာ ..... :P:P:P
ဒါပေမယ့် လေ ဘမ်းထားတယ်..:2:
ဒါပေမယ့်လေ မြန်မာပြည်က ကော်နက်ရှင်နဲ့က ရန်ဖြစ်နေတယ်မောင်လေးရယ်:106:
ဘယ်နေရာမှာ အပ်လုပ်တင်ပေးရမလဲပြောပါ။ အဆင်ပြေမဲနေရာမှာ ကျတော်တင်ပေးပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ် မေးလ်ထဲကို ပို့ပေးရမလား။ သေးသွားအောင် ဖိုင်ဆိုဒ်ထပ်ခွဲ ပြီးတော့ တစ်ဖိုင်းချင်းစီကြည့်လို့ရအောင် တင်ပေးပါမယ်။ chapter အလိုက်ပေါ့...။ ဒါမှမဟုတ် email ထဲကို ပို့ပေးရမလား။ ကျတော့မေးလ်က puluque(at) gmail dot com ပါ။
အမမေးကို pm ပို့လိုက်လဲရပါတယ်
I also want to this book. Please upload for me.
4 shared or z shared
mr.explorer wrote: »
explorer ရေ 4shared ကနေပြန်တင်ပေးထားပါတယ်။
I was take4hours for complete this download.
My connection is too bad:D
Now, I got this file completely.
မြန်မာလိုလေး ရရင် အရမ်းကောင်းမယ်